ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ ယူမယ့်ယောကျာ်းမရှိဘူးတဲ့လား? - For her Myanmar
မိန်းကလေးဆိုရင် အိမ်ထောင်မှုကိစ္စနဲ့ပဲ တွဲမြင်တတ်တဲ့အမြင်တွေ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပါပြီ။
နှင်းအိမ်ကလူကြီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ အမြဲပြောနေကြတာတစ်ခုရှိတယ်။ ‘မိန်းကလေးဆိုတာ အရမ်းမထက်ရဘူး။ အရမ်းထက်ရင် ယူမယ့်လူမရှိဘဲဖြစ်ရော…’ ‘နင်အရမ်း feminist (အမျိုးသမီးဝါဒီ) မဖြစ်ပါနဲ့ နင့်ကိုယူမယ့်လူမရှိဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။’ ရော် ခက်ကုန်ပြီ။ ယူမယ့်လူရှိရှိမရှိရှိ အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့ ဘာလို့လဲ? မိန်းကလေးဖြစ်လာတာနဲ့ အမြဲတမ်းထမင်းဟင်းချက်၊ အိမ်ထဲမှာပဲ ကုပ်ကပ်ပြီးနေ သားသမီးမျက်နှာ၊ ယောကျာ်းမျက်နှာကိုပဲ ကြည့်ပြီးနေရမယ်လို့ ဘယ်ဥပဒေ ဘယ်စာအုပ်မှာ သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ထားတုန်း? နိုးနိုးနိုး ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် ယူမယ့်ယောကျာ်းရှားတာ မဟုတ်ဘူးရယ်… ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးကို လက်ထပ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်းရှိပြီး အမြင်ကျယ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးရှားတာ။ ကိုယ်ထက်မြက်တာက အပြစ်မဟုတ်ဘဲ တစ်ဘက်ကတုံးနေတာက အပြစ်ဖြစ်နေတာပါယောင်းရဲ့။
Related Article >>> တစ်ကောင်တည်းပဲ ဒါပေမဲ့ ခြင်္သေ့
တကယ်တမ်း ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း သူများတွေပြောသလို ရေးသလို လွယ်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်နိုင်ရမယ်၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကောင်းကောင်းယူနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း မတွေဝေဘဲ စိတ်ဓာတ်ကိုမြဲမြဲထားပြီး ချနိုင်ရမယ်၊ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲကောင်းကောင်းသိပြီး ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့အိပ်မက်ဖြစ်နေပါစေ တစ်နေ့တော့ ငါရအောင်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးထားကိုထားနိုင်ရမယ်၊ ကိုယ့်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကိုလည်း အမြဲရှာနိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို တက်လှမ်းနိုင်တဲ့လူမျိုး ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါမှတကယ်ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေဖို့ဆိုတာလည်း တကယ်တမ်းကျတော့ မလွယ်ဘူးလေ။ နောက်ပြီး နှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာလွန်စွာ မိန်းကလေးတွေသည် ဒုတိယတန်းစားဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားတဲ့ ပုရိသတို့အတွက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့်ကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာမယ့် မိန်းမမျိုးကိုပဲ တစ်ဘဝလုံးစာ လက်တွဲချင်ကြတာဆိုတော့ ဒီလို ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ် တိုက်ယူမယ့်မိန်းကလေးမျိုးမြင်ရင် သူတို့အလက်ဂျစ်တွေဖြစ်ပြီ။ ဝေးဝေးကပြေးချင်ပြီ။
ပြီးတော့ တစ်သက်လုံး ကိုယ့်ဘိုးဘေးတွေကအစ ကိုယ့်အဖေ၊ ဦးလေးတွေအဆုံး အကုန်လုံးက ဒီပုံစံပဲ သူတို့မိန်းမတွေကိုထားတော့ သူ့အလှည့်ကျရင်လည်း ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းရမယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ မိန်းမကိုပဲ စံအနေနဲ့ထားထားတော့ ဒီလိုခပ်ထက်ထက် မိန်းကလေးတွေမြင်တဲ့အခါ သူတို့ရင်တွေ တစ်မမဖြစ်ရပြီ။ အဲ့တော့ မစားရတဲ့စပျစ်သီးက ချဉ်တယ်ပေါ့။ ဒီလိုထက်တဲ့မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ခေါင်းကိုတစ်သက်လုံးနင်းထားမယ့် မိန်းမတွေပါပေါ့။ (တချို့ကတော့ အရမ်းဂုဏ်ဆာတတ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ တကယ်လည်း ဖိနှိပ်အော်ဟစ်ဆဲဆိုတတ်တဲ့ လူမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တိုင်း အကုန်လုံးက ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တာတော့ သိစေချင်။)
အမှန်တော့လေ ဘယ်လောက်ပဲထက်ထက် လူကလူပါပဲ။ ဝမ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့အချိန်၊ အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာ မှီစရာပခုံးတစ်စုံတော့ လိုအပ်တယ်လေ။ (အိုင့်ရုံးက လက်ဂျန်ဒွီအစ်မကြီးကတော့ မလိုဘူးလို့ပြောတယ် :P) ဒါပေမဲ့ တစ်ခုပဲ။ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေ လိုချင်တဲ့ရင်ခွင်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖြန့်ပြီးပျံသန်းမယ့်အတောင်တွေကို ရိုက်ချိုးမယ့်လူမျိုးတွေ မဟုတ်ဖို့၊ သူတို့ဆက်သွားမယ့်လမ်းမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်မနေဖို့တော့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို နားလည်ပေးပြီး ရှေးရိုးစွဲအမျိုးသားမဟုတ်ဖို့၊ ဘေးစကားတွေနားယောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုလမ်းတစ်ဝက်မှာ ထားခဲ့တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အလုပ်ထဲမှာစိတ်နစ်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်အချိန်မပေးနိုင်တာလေးလည်း နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော် :P။ ဒီလောက်လေးတွေ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်ပဲ ခပ်ထက်ထက်အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ။
Related Article >>> ဒီထက်ပိုပြီး ထိုက်တန်ပါတယ်
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးလေးတွေ ကိုယ်ကထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ သွက်သွက်လက်လက်နေတတ်လို့ လူအများကယောကျာ်းမရနိုင်ဘူး၊ ဘာညာလျှောက်ပြောနေတာတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်လိုက် (ဝင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သိတယ် :P) ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုသာ ကောင်းကောင်းဆက်သွား၊ ကိုယ့်အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံပေးမယ့် လူကတော့ အနားရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ အာ့ကြောင့် နောက်တစ်ခါ သူများတွေက နင်ကအရမ်းထက်တာပဲ၊ ဘယ်သူမှယူရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး လို့လာပြောရင် ‘ငါ့အရည်အချင်းနဲ့ထိုက်တန်ပြီး ငါ့ကိုနားလည်နိုင်မယ့်ယောက်ျားရှိမှယူမယ်။ မရှိရင်လို့ ငါတစ်ယောက်တည်းနေရရင်လည်း အပန်းတော့မကြီးပါဘူး’ လို့ခပ်ချေချေသာပြောခဲ့လိုက်ပါ ယောင်းတို့။
မိနျးကလေးဆိုရငျ အိမျထောငျမှုကိစ်စနဲ့ပဲ တှဲမွငျတတျတဲ့အမွငျတှေ ပွောငျးလဲခြိနျတနျပါပွီ။
နှငျးအိမျကလူကွီးတှနေဲ့ ဆှမြေိုးတှေ အမွဲပွောနကွေတာတဈခုရှိတယျ။ ‘မိနျးကလေးဆိုတာ အရမျးမထကျရဘူး။ အရမျးထကျရငျ ယူမယျ့လူမရှိဘဲဖွဈရော…’ ‘နငျအရမျး feminist (အမြိုးသမီးဝါဒီ) မဖွဈပါနဲ့ နငျ့ကိုယူမယျ့လူမရှိဘူးဖွဈနလေိမျ့မယျ။’ ရျော ခကျကုနျပွီ။ ယူမယျ့လူရှိရှိမရှိရှိ အရေးမကွီးဘူးဆိုပမေဲ့ ဘာလို့လဲ? မိနျးကလေးဖွဈလာတာနဲ့ အမွဲတမျးထမငျးဟငျးခကျြ၊ အိမျထဲမှာပဲ ကုပျကပျပွီးနေ သားသမီးမကျြနှာ၊ ယောကျြားမကျြနှာကိုပဲ ကွညျ့ပွီးနရေမယျလို့ ဘယျဥပဒေ ဘယျစာအုပျမှာ သတျမှတျခကျြထုတျထားတုနျး? နိုးနိုးနိုး ထကျမွကျတဲ့မိနျးကလေးတှအေတှကျ ယူမယျ့ယောကျြားရှားတာ မဟုတျဘူးရယျ… ထကျမွကျတဲ့မိနျးကလေးကို လကျထပျနိုငျလောကျတဲ့အထိ အရညျအခငျြးရှိပွီး အမွငျကယျြတဲ့ယောကျြားမြိုးရှားတာ။ ကိုယျထကျမွကျတာက အပွဈမဟုတျဘဲ တဈဘကျကတုံးနတောက အပွဈဖွဈနတောပါယောငျးရဲ့။
Related Article >>> တဈကောငျတညျးပဲ ဒါပမေဲ့ ခွင်ျသေ့
တကယျတမျး ထကျမွကျတဲ့မိနျးကလေးဖွဈဖို့ ဆိုတာကလညျး သူမြားတှပွေောသလို ရေးသလို လှယျတာမှမဟုတျဘဲ။ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါရပျနိုငျရမယျ၊ ကိုယျ့တာဝနျကိုယျကောငျးကောငျးယူနိုငျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုလညျး မတှဝေဘေဲ စိတျဓာတျကိုမွဲမွဲထားပွီး ခနြိုငျရမယျ၊ ကိုယျဘာဖွဈခငျြလဲကောငျးကောငျးသိပွီး ဘယျလောကျကွီးတဲ့အိပျမကျဖွဈနပေါစေ တဈနတေ့ော့ ငါရအောငျဖွဈအောငျ လုပျနိုငျရမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးထားကိုထားနိုငျရမယျ၊ ကိုယျ့တိုးတကျရာ တိုးတကျကွောငျးကိုလညျး အမွဲရှာနိုငျပွီး ပိုကောငျးတဲ့ အခွအေနတေဈခုကို တကျလှမျးနိုငျတဲ့လူမြိုး ဖွဈနရေပါမယျ။ ဒါမှတကယျထကျမွကျတဲ့မိနျးမ ဖွဈမှာပါ။
ဒီလိုမြိုးတှဖွေဈနဖေို့ဆိုတာလညျး တကယျတမျးကတြော့ မလှယျဘူးလေ။ နောကျပွီး နှဈပရိစ်ဆဒေကွာလှနျစှာ မိနျးကလေးတှသေညျ ဒုတိယတနျးစားဆိုတဲ့ အတှေးအချေါကို ရငျဝယျပိုကျထားတဲ့ ပုရိသတို့အတှကျကတော့ သူတို့ရဲ့ တဈသှေးတဈသံတဈမိနျ့ကို တသှမေတိမျးလိုကျနာမယျ့ မိနျးမမြိုးကိုပဲ တဈဘဝလုံးစာ လကျတှဲခငျြကွတာဆိုတော့ ဒီလို ကိုယျ့အခှငျ့အရေးကိုယျ တိုကျယူမယျ့မိနျးကလေးမြိုးမွငျရငျ သူတို့အလကျဂဈြတှဖွေဈပွီ။ ဝေးဝေးကပွေးခငျြပွီ။
ပွီးတော့ တဈသကျလုံး ကိုယျ့ဘိုးဘေးတှကေအစ ကိုယျ့အဖေ၊ ဦးလေးတှအေဆုံး အကုနျလုံးက ဒီပုံစံပဲ သူတို့မိနျးမတှကေိုထားတော့ သူ့အလှညျ့ကရြငျလညျး ဒီလိုပဲဖွတျသနျးရမယျ၊ သူတို့ကိုယျတိုငျကလညျး ဟငျးခကျြကောငျးတဲ့ မိနျးမကိုပဲ စံအနနေဲ့ထားထားတော့ ဒီလိုခပျထကျထကျ မိနျးကလေးတှမွေငျတဲ့အခါ သူတို့ရငျတှေ တဈမမဖွဈရပွီ။ အဲ့တော့ မစားရတဲ့စပဈြသီးက ခဉျြတယျပေါ့။ ဒီလိုထကျတဲ့မိနျးကလေးတှကေ ကိုယျ့ခေါငျးကိုတဈသကျလုံးနငျးထားမယျ့ မိနျးမတှပေါပေါ့။ (တခြို့ကတော့ အရမျးဂုဏျဆာတတျတာမြိုး ရှိပါတယျ။ တကယျလညျး ဖိနှိပျအျောဟဈဆဲဆိုတတျတဲ့ လူမြိုးပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတိုငျး အကုနျလုံးက ဒီလိုပုံစံမြိုးမဟုတျတာတော့ သိစခေငျြ။)
အမှနျတော့လေ ဘယျလောကျပဲထကျထကျ လူကလူပါပဲ။ ဝမျးနညျးအားငယျနတေဲ့အခြိနျ၊ အရမျးပငျပနျးနတေဲ့အခြိနျမှာ မှီစရာပခုံးတဈစုံတော့ လိုအပျတယျလေ။ (အိုငျ့ရုံးက လကျဂနျြဒှီအဈမကွီးကတော့ မလိုဘူးလို့ပွောတယျ :P) ဒါပမေဲ့ တဈခုပဲ။ ဒီလိုမိနျးကလေးတှေ လိုခငျြတဲ့ရငျခှငျကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖွနျ့ပွီးပြံသနျးမယျ့အတောငျတှကေို ရိုကျခြိုးမယျ့လူမြိုးတှေ မဟုတျဖို့၊ သူတို့ဆကျသှားမယျ့လမျးမှာ အနှောကျအယှကျဖွဈမနဖေို့တော့ အရမျးအရေးကွီးတယျ။ သူတို့ရဲ့အိပျမကျတှကေို နားလညျပေးပွီး ရှေးရိုးစှဲအမြိုးသားမဟုတျဖို့၊ ဘေးစကားတှနေားယောငျပွီး ကိုယျ့ကိုလမျးတဈဝကျမှာ ထားခဲ့တဲ့လူမြိုး မဟုတျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ တဈခါတလေ အလုပျထဲမှာစိတျနဈပွီး ကိုယျ့အပျေါအခြိနျမပေးနိုငျတာလေးလညျး နညျးနညျးရှိတယျပေါ့နျော :P။ ဒီလောကျလေးတှေ ဖွညျ့ဆညျးနိုငျရငျပဲ ခပျထကျထကျအမြိုးသမီးလေးတှနေဲ့ အဆငျပွပေါပွီ။
Related Article >>> ဒီထကျပိုပွီး ထိုကျတနျပါတယျ
ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးလေးတှေ ကိုယျကထကျထကျမွကျမွကျနဲ့ သှကျသှကျလကျလကျနတေတျလို့ လူအမြားကယောကျြားမရနိုငျဘူး၊ ဘာညာလြှောကျပွောနတောတှကေို ခေါငျးထဲကထုတျပဈလိုကျ (ဝငျမှာလညျးမဟုတျဘူး။ သိတယျ :P) ကိုယျ့ပနျးတိုငျကိုသာ ကောငျးကောငျးဆကျသှား၊ ကိုယျ့အရှိကိုအရှိအတိုငျး လကျခံပေးမယျ့ လူကတော့ အနားရောကျကိုရောကျလာလိမျ့မယျ။ အာ့ကွောငျ့ နောကျတဈခါ သူမြားတှကေ နငျကအရမျးထကျတာပဲ၊ ဘယျသူမှယူရဲတော့မှာမဟုတျဘူး လို့လာပွောရငျ ‘ငါ့အရညျအခငျြးနဲ့ထိုကျတနျပွီး ငါ့ကိုနားလညျနိုငျမယျ့ယောကျြားရှိမှယူမယျ။ မရှိရငျလို့ ငါတဈယောကျတညျးနရေရငျလညျး အပနျးတော့မကွီးပါဘူး’ လို့ခပျခခြေသြောပွောခဲ့လိုကျပါ ယောငျးတို့။
Tags: allowed, bright, girls, men, No, noob, Rule, the, World
ယောက်ျားလေးပဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ တဲ့လား....